Cilmi-baadhista Cilmi-nafsiga ee isticmaalka Porn - Foundation Abaal-marinta
Bogga ugu weyn Cilmi-baadhista Cilmi-nafsiga ee Isticmaalka Porn
Cilmi-baadhayaashu waxay adeegsadeen daraasado cilmi-baaris si ay u eegaan saameynta sawir-gacmeedyada iyagoo isticmaalaya qalabyo ay ka mid yihiin fMRI, MRI iyo EEG. Waxa kale oo ay sameeyeen daraasado lagu yaqaano neuro-endocrine iyo neuro-pyschological. Boggan waxaa laga soo qaatay Yourbrainonporn.com. Fadlan booqo Yourbrainonporn.com haddii aad rabto macluumaad dheeri ah oo ku saabsan cilmi-baarista ugu dambeysa ee saameynta isticmaalka suuqyada.
Daraasadaha dareenka ee hoos ku qoran ayaa loo kala saaraa laba siyaabood. Marka ugu horeysa ee isbedelka maskaxda ee la xidhiidha isticmaalka maskaxda ee qof kasta la soo sheego Hoos waxaa ku qoran daraasado isku mid ah oo ay ku qoran yihiin taariikhda daabacaadda, iyada oo la raacayo qeexitaanno iyo caddayn.
Liiska isbeddelka isbedelka maskaxda ee la xiriira maanka: Afarta nambar ee waawayn ee isbeddelka ah ee ay ku dhacaan takooridda waxaa lagu sharraxay George F. Koob iyo Nora D. Volkow dib u eegistooda. Koob waa Agaasimaha Machadka Qaranka ee Khamriga iyo Khamriga (NIAAA), iyo Volkow waa agaasimaha Machadka Qaranka ee Xad-gudubka Daroogada (NIDA). Waxaa lagu daabacay Wargayska New England Journal of Medicine: Noociyoolajiyadeed Noocyada ka yimaada Habka Cudurrada Cudurka Maskaxda (2016). Qoraalku wuxuu sharxayaa isbeddellada weyn ee maskaxda ee ku lug leh mukhadaraadka iyo dabeecadaha asluubta labadaba, halka ay ku tilmaamayaan cutubka furan ee ah galmada khamriga ee jira:
"Waxaannu ku soo gabagabeyneynaa in neurosiyadu ay sii waddo taageerada maskaxda ee mukhaadaraadka. Cilmi-baarista neerfiyoolojiga ee meeshan ma aha oo kaliya inay bixiso fursado cusub oo ka hortagga iyo daaweynta macaamilka maandooriyaha iyo waxyaabaha la xariira dabeecadaha la xiriira (tus., Cuntada, galmada, iyo khamaar) .... "
Warqadda Volkow & Koob waxay sharraxday afar isbeddel aasaasi ah oo sababa isbeddelada maskaxda, kuwaas oo ah: 1) Dareenka, 2) Maqnaanshaha, 3) Xayawaanka horay loo yaqaan 'functional prefect' (hypofrontality), 4) Nidaamka cadaadiska ee aan fiicnayn. Dhamaan 4 ee isbedelada maskaxda ayaa lagu ogaadey baadhitaano badan oo ku saabsan bogaggaan:
Daraasad cilmiyeedka dareenka (cue-reactivity & damacyada) dadka isticmaala sigaarka / galmada galmada: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
Daraasad cilmiyeedka Maqnaanshaha ama habeyn (oo keena dulqaad) ee dadka isticmaala sifaha / galmada galmada: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Soosaarista cilmi baarista shaqeysa ee fulinta liidata (hypofrontality) ama waxqabadka hore ee isbeddelka ah ee dadka isticmaala sirdoonka / galmada galmada: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Daraasado muujinaya a Nidaamka cadaadiska ee aan caadiga ahayn in dadka isticmaala loola jeedo / galmada jinsiga: 1, 2, 3.
Liisaska taariikhda daabacaadda: Liistada soo socota waxaa ku jira dhammaan daraasaadka neerfaha ee lagu soo bandhigay dadka isticmaala sigaarka iyo galmada jinsiga. Daraasad kasta oo hoos ku taxan ayaa la socota sharaxaad ama maqnaashaha, waxayna muujineysaa midka isbedelka maskaxda ee 4-ku xirnaanta maskaxda ee la xidhiidha wax ka qabashada natiijooyinka:
1) Baaritaan Hore ah ee Astaamaha Aasaasiga ah iyo Naasnuujiyaanka Nidaamka Dabeecadda Isku Galmoodka (Miner et al., 2009)
[wareegyada hore ee aan shaqeynin / howlaha fulinta ee saboolka ah] - daraasadda fMRI oo ku lug leh ugu horreyntii kuwa balwada leh. Daraasadu waxay soo gudbineysaa dabeecad deg deg ah oo ku saabsan hawsha Go-NoGo ee kufsiga galmada (hypersexuals) marka la barbar dhigo kaqeybgalayaasha xakamaynta. Baadhitaannada Maskaxda ayaa shaaca ka qaaday in dadka balwada leh ee galmada ay kala habeeyeen arrinta kiliyaha hore ee korantada marka loo eego kontaroolada Qeybaha
Marka lagu daro tallaabooyinka kor ku xusan, bukaanada CSB waxay sidoo kale muujiyeen inay si weyn u saameyn ku yeeshaan hawlaha akhlaaqda, nidaamka Go-No Go.
Natiijooyinka waxa kale oo ay tilmaamayaan in bukaannada CSB ay muujiyeen inay aad u sarreeyaan oo ka sarreeyaan gobolka horay loo yaqaan 'diffusion' (MD) marka loo eego kontoroolka Falanqaynta isku xirka ayaa tilmaamaya ururo muhiim ah oo u dhaxeeya tallaabooyinka niyad-jabka iyo aagga hoose ee aaladda jimicsiga (FA) iyo MD, laakiin ma jirto ururo leh tallaabooyin heer sare ah oo hor leh. Falanqaynnada la midka ah waxay muujiyeen xiriirka xun ee u dhaxeeya miyir-beelka sare ee hormarka MD iyo habdhaqanka galmada ee khasabka ah.
2) Khilaafaadka is-dhiibay ee ku saabsan waxqabadyada hawl fulinta iyo dabeecadaha ciriiriga ah ee bukaanka iyo muunada bulshada (Reid iyo al., 2010)
[hawlaha fulinta ee saboolka ah] - Xigasho:
Bukaannada raadinaya caawinta habdhaqanka galmada badanaa badiyaa waxay muujiyaan astaamaha kacsanaan, qallafsanaanta garashada, go'aan qaadashada oo liidata, hoos u dhaca qawaaniinta shucuurta, iyo ku mashquulida xad dhaafka ah ee galmada. Qaar ka mid ah astaamahan ayaa sidoo kale caan ku ah bukaanada soo bandhigaya cudurada neerfaha ee la xiriira cillad fulinta. Indha-indhayntani waxay horseedday baaritaanka hadda ee kala duwanaanshaha u dhexeeya koox bukaanno isku-dhafan (n = 87) iyo muunad bulshada ka tirsan oo aan ahayn hypersexual (n = 92) ragga adeegsanaya Qiimeynta Dabeecadda Dabeecadda ee Waxqabadka Fulinta-Nooca Dadka Weyn ee dabeecadda xun ayaa si wanaagsan loola xiriiriyay oo leh indhooleyaal caalami ah oo ku saabsan cillad fulinta iyo dhowr qaybood oo kooban oo ah 'BRIEF-A'. Natiijooyinkaani waxay bixiyaan caddayn horudhac ah oo taageeraya mala-awaalka ah in cillad-fulinta ay ku lug yeelan karto dabeecad-xumada.
3) Daawashada Sawirada Pornographic ee Internetka: Doorka Saacadaha Galmada Aroosyada iyo Calaamadaha Cilmi-nafsiyeed ee Maskaxeed ee Isticmaalida Goobaha Internetka ee Jinsiga Si xad dhaaf ah (Brand et al., 2011)
[jaahwareer weyn / dareenka iyo hawlaha saboolka ah]
Natiijooyinka waxay muujinayaan in dhibaatooyinka is-sheegida ee noloshooda maalinlaha ah ay ku xiranyihiin hawlaha galmada ee internetka lagu saadaaliyo qiyaasaha arimaha galmada ee jinsiga ah, darnaanta guud ee calaamadaha nafsiga ah, iyo tirada codsiyada jinsiga loo isticmaalo marka lagu jiro goobaha internetka ee galmada ee nolol maalmeedka, halka wakhtiga lagu kharash gareeyey goobaha galmada ee internetka (daqiiqo maalintii) aysan si weyn wax uga tarin sharaxaadda isbeddelka dhibcaha IATsex. Waxaan aragnaa qaar ka mid ah isbarbardhigyada garashada iyo qaababka maskaxda ee ay ugu suurogal badan tahay bixinta cybersex xad-dhaaf ah iyo kuwa lagu sharxay shakhsiyaadka leh ku-tiirsanaanta maandooriyaha.
4) Ka shaqaynta sawir-gacmeedka sawir-qaadista waxay faragalin ku sameysey Heerka Xasilaadda ShaqadaLaier et al., 2013)
Shakhsiyaadka qaarkood waxay soo sheegaan dhibaatooyinka inta lagu jiro iyo kadib galmoodka internetka, sida hurdo la'aanta iyo balanqaadka ballamada, kuwaas oo la xiriira waxyeelo xun ee nolosha. Mid ka mid ah farsamooyinka u horseedaya dhibaatooyinka noocaas ah waa in jahwareerka galmada inta lagu guda jiro jinsiga internetka uu faragelin karo kartida shaqaynta (WM), taas oo keentay in la dayaco macluumaadka deegaanka ee ku habboon iyo sidaas darteed go'aamo aan faa'iido lahayn. Natiijooyinka ayaa muujinaya inay ka sii darayaan heerka WM ee muuqaalka muuqaalka sawir-gacmeedka 4-dhabarka marka la barbardhigo saddexda shuruudood ee muuqaalka. Natiijooyinka ayaa laga wada hadlay tixgelinta isticmaalka internetka sababtoo ah faragelinta WM ee calaamadaha mukhaadaraadka la xidhiidha waxaa si fiican looga yaqaanaa walxaha ku xiran walxaha.
5) Sawiridda jinsi sawirku wuxuu farageliyaa go'aan qaadashada kaamilnimada (Laier et al., 2013)
Waxqabadka go'aaminta ayaa ka sii xumaatay marka sawirada galmada la xidhiidha dusha kaararka kaararka ah marka la barbardhigo waxqabadka marka sawirada galmada ay ku xiranyihiin macaawino faa'iido leh. Dabeecad galmo oo dabiici ah ayaa dhexdhexaadisay xiriirka u dhaxeeya xaalada shaqada iyo waxqabadka go'aan qaadashada. Daraasadani waxa ay carrabka ku adkeeyeen in jinsiga galmada la farageliyay go'aan qaadashada, taas oo sharxi karta sababta shakhsiyaadka qaarkood ay u arkaan cawaaqib xun oo ku saabsan isticmaalka isticmaalka cybersex.
6) Isticmaalidda Cybersex: Dabeecada galmada ee khibrad leh marka daawashada sawir-qaadashada looma baahna xiriirka galmada ee nolosha dhabta ahLaier et al., 2013)
Natiijooyinka waxay muujinayaan in tilmaamayaasha arooska jinsiga ah iyo aflagaadada loo yaqaan 'pornographic pornographic Internet' oo la saadaaliyay dareenka ku aaddan daroogada cybersex ee daraasadda kowaad. Intaa waxaa dheer, waxaa la muujiyey in dadka isticmaala internetka qatarta ah ay ku soo wargeliyaan arooska jinsiga ah iyo rabshadaha ka yimaada soo bandhigista sheekooyinka dabiiciga ah. Labada daraasadoodba, lambarka iyo tayada xiriirka galmada ee nolosha dhabta ah looma taaban karin isticmaalka maandooriyaha. Natiijooyinku waxay taageeraan sharraxaadda macquulnimada, taas oo u malaynaysa xoojinta, hababka barashada, iyo ku qanacsan tahay in ay noqdaan geeddi-socodka habboon ee horumarka iyo dayactirka isticmaalka cybersex. Xidhiidhada nolosha dhabta ah oo aan fiicnayn ama aan ku qanacsanayn waxay kufilan karaan maandooriyaha maandooriyaha.
7) Dhiirranaan galmo, oo aan ahayn Qaamuuska 'HyperSupuality', waxay la xiriirtaa Jawaabaha Xanuunada 'Neurophysiological Responses' oo laga helay Sawirrada Galmada (Steele et al., 2013)
[falsafad weyn oo xiriir la leh rabitaan galmo oo yaraata: dareenka iyo dabeecadda] - Daraasaddan EEG ayaa loo aaneeyey warbaahinta sida caddayn ka soo horjeeda jiritaanka xatooyo / galmada. Maya sidaas. Steele et al. 2013 dhab ahaantii waxay taageertaa jiritaanka lamaane-xatooyo iyo porno isticmaalka hoos-u-dhigista rabitaanka galmada. Sidee ayuu sidaas u yahay? Daraasadu waxay soo saartay akhriska EEG ee sareeya (marka loo eego sawirro dhexdhexaad ah) marka maadooyinka si kooban loogu soo bandhigay sawiro muuqaal ah. Daraasaduhu waxay si joogta ah u muujiyaan in P300 sare u dhaco marka dadka la soo daristo ay ku dhacaan amarrada (sida sawirrada) oo la xiriira ciyaalkoodii.
Iyadoo la raacayo Jaamicada Cambridge University oo daraasad lagu sameeyay, daraasaddan EEG-da ayaa sidoo kale soo warisay waraaqo badan oo la xidhiidha jilicsanaanta si ay ufudud u yeelato rabitaan yar oo jinsi wadaag ah. Si aad uhesho hab kale - shakhsiyaadka leh maskax ahaan maskax ahaan si ay u leexiyaan si ay u leexiyaan si ay u jilicsanaadaan marka la galmoodo qofka dhabta ah. Afduubka, afhayeenka waxbarashada Nicole Prause ayaa sheegtay in dadka isticmaala sifaha kaliya ay leeyihiin "libood sare," laakiin natiijooyinka daraasadda ayaa sidaas leh ka soo horjeeda dhabta ah (maadooyinka 'rabitaanka jinsiga la wadaago ayaa hoos u dhacay marka loo eego isticmaalka ladnaanta).
Wadajir ahaan labadaba Steele et al. Natiijooyinka waxay muujinayaan firfircooni maskaxeed oo badan oo lagu muujinayo (sawirada muuqaalka), laakiin weli wax falcelin ah u leh abaalmarinta dabiiciga ah (jinsi qof). Labadaba waa calaamadaha mukhaadaraadka. Lix waraaqood oo ka-dib-u-eegis ah ayaa sharraxaya runta: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sidoo kale arag tan talabixin ballaaran YBOP.
Marka laga soo tago sheegashooyinka badan ee aan la sheegan ee saxaafadda, waxaa dhibaya in baaritaanka 2013 EGG-da ay soo gudbiyaan dib-u-eegis, iyada oo ay ka soo gaadhay cilladaha khatarta ah: 1) heterogeneous (ragga, dumarka, aan heterosexuals); 2) maadooyinka lama baadho cudurada maskaxda ama xayiraad; 3) daraasaddan ma jiro koox la xakameeyo marka la barbar dhigo; 4) su'aalaha waydiisteen aan lagu ansaxin isticmaalka sigaarka ama isticmaalka mukhaadaraadka.
8) Qaabdhismeedka Maskaxda iyo Isku-xirnaanta Farsamada Isku-xidhan Isticmaalka Sawir-gacmeedka Lahaanshaha: Maskaxda ku jirta Porn (Kuhn & Gallinat, 2014)
[miyir beelid, habeyn, iyo wareeggeedii hore ee aan shaqeynin]. Machadkan Max Planck Institute fMRI wuxuu soo wariyay 3 natiijooyinka neerfaha ee laxiriira heerarka sare ee isticmaalka sigaarka: (1) nidaamka abaalmarinta oo yaraada (dorsal striatum), (2) firfircoonida wareegga abaalmarinta iyadoo si kooban loo daawado sawirrada galmada, (3) iskuxirnaanta shaqeynta saboolka ah inta udhaxeysa marinka dhabarka iyo kiliyaha hore ee jirka. Cilmi baarayaashu waxay u fasirteen natiijooyinka 3 inay yihiin calaamad muujinaysa saameynta soo-gaadhista galmada muddada-dheer. Daraasaddu waxay tidhi,
Tani waxay la socotaa sawir-qaadista ah in khatarta ugu badan ee soo-kicinta maskaxdu ay keento hoos-u-dhigidda qawaaniinta dabiiciga ah ee dabeecada jinsiga.
Marka la tilmaamayo xiriirka farsamada liidata ee ka dhexeeya PFC iyo baaritaanka ayaa muujiyay,
Kala soocista wareeggaan waxay la xiriirtay doorashooyin aan habboonayn, sida daroogada raadinaya, iyadoon loo eegin natiijooyinka taban
Qoraasha hogaanka Simone Kühn faallo ka bixisay war-saxaafadeedka Max Planck:
Waxaan u maleyneynaa in maadooyinka leh isticmaalka soodhaha sareeya ay u baahan yihiin kicinta sii kordheysa si ay u helaan qiime isku mid ah. Taas macnaheedu waxa weeye in isticmaalka joogtada ah ee pornography ay ka badan ama ka yar yihiin nidaamka abaalmarinta. Taasi waxay ku haboonaan laheydan habka mabda'a ah in nidaamyada abaal-marintoodu u baahan yihiin kicinta sii kordheysa.
9) Nuural Dhexdhexaadinta Cunto-celinta Cudurrada Galmada Shakhsiyaadka leh oo aan lahayn Dabeecad-Galmo Isku-Digniin ah (Voon vd., 2014)
[dareen-celin / cue-reactivity iyo miyir-beelid] Kii ugu horreeyay ee taxanaha ah ee Jaamacadda Cambridge University waxay heshay isla qaab maskaxeed maskaxeed oo ku saabsan dadka balwada leh (maadooyinka CSB) sida lagu arkay daroogooyinka daroogada iyo khamriga - cue-reactivity or sensitization. Cilmibaare hogaamiya Valerie Voon wuxuu yiri:
Waxaa jira faraqyo cad oo maskaxeed oo u dhexeeya bukaanada leh dabeecad galmo qasab ah iyo tabarucayaal caafimaad leh. Faraqyadani waxay muraayad u yihiin kuwa daroogada ah.
Voon et al., 2014 ayaa sidoo kale ogaatay in fannaanka porn ka dhejisan yahay habka daaweynta ee la aqbalay oo doonaya "wax" oo dheeraad ah, laakiin aan jeclayn "wax" oo kale. Sooc:
Marka loo barbardhigo mutadawiciin caafimaad leh, maadooyinka CSB waxay leeyihiin rabitaan jinsi oo weyn ama waxay doonayaan inay muujiyaan sharaxaad cad oo ay yeeshaan dhibco aad uwanaagsan oo loo muujiyo calaamadaha erotic, taas oo muujinaysa kala-dambeynta u dhexeeya doonista iyo jecel
Cilmi-baadhayaasha ayaa sidoo kale soo wariyay in 60% maadooyinka (da'da celceliska: 25) ay ku adkaatay in ay gaaraan jahwareer / arousal la lamaanayaasha dhabta ah, haddana waxa ay ku guuleysan karaan ereyada porno. Tani waxay muujinaysaa xasaasiyad ama habeyn. Astaamaha:
Mawduucyada CSB waxay soo sheegeen in isticmaalka xad-dhaafka ah ee qalabka loo yaqaanno galmo-ahaaneed ... ... khibrad la yiraahdo libido ama shaqeyn erectile gaar ahaan xiriirka jireed ee haweenka (inkasta oo aan xiriir la lahayn qalabka galmada)
Maaddooyinka CSB marka loo eego kuwa mutadawiciin caafimaad qaba waxay si aad ah u dhib badan yihiin jinsiga galmada iyo khibrado badan oo qalafsan oo la xidhiidha cilaaqaadka jinsiga ah ee la xidhiidha galmada laakiin aan loo baahneyn galmo caddayn ah.
10) Horumarinta Feejignaanta La Xidhiidha Hantida Calaamadaha Jinsiga ah ee Shakhsiyaadka leh oo aan laheeyn Habdhaqanka Galmoodka ah (Mechelmans et al., 2014)
[sensitization / cue-reactivity] - Daraasaddii labaad ee Jaamacadda Cambridge. Qayb ka mid ah:
Natiijooyinkayaga ah ee xag-jirnimada ee la xoojiyey ... waxay soo jeedinayaan suurtagalnimada iskudhacyo iyadoo la xoojiyay indho-indheyn indho-indhayn ah oo lagu arkay baadhitaannada daroogada daroogada ee xanuunada xayawaanka. Natiijooyinkaasi waxay isu keenaan natiijooyinka dhowaan soo noqnoqonaya dareenkooda xagga galmada ah ee ku saabsan calaamadaha muujinaya galmada ee [ladagaalayaasha galmada] ee shabakad la mid ah taas oo ku lug leh daraasadaha daroogooyinka-fal-celiska iyo bixinta taageerada fikradaha dhiirigelinta dhiirigelinta ah ee mukhadaraadka oo hoos yimaada jawaab celinta aberrant ee calaamadaha galmada [ gabdhaha qaawan]. Sawiradani waxa ay ka muuqdaan indho-indheynteenii ugu dambeeyay ee fiidiyoowyo ficil galmo ah oo la xidhiidha dhaqdhaqaaqa weyn ee shabakada neerfureed oo la mid ah sida lagu arkay daraasadaha daroogo-falcelinta. Doonitaan weyn ama rabitaan halkii uu jeclaan lahaa ayaa sii dheer oo la xidhiidha dhaqdhaqaaqa shabakadan neeriga ah. Daraasadahaani waxay si wadajir ah u taageeri doonaan aragti dhiirigalin ah oo ku saabsan mukhadaraadka oo hoosta ka xariiqaya jawaab celinta aberrant ee calaamadaha galmada ee CSB.
11) Isticmaalka Cybersex ee isticmaalayaasha haweenka heterosexual ee filimada internetka ayaa lagu sharxi karaa sharraxaadda rikoodhka (Laier et al., 2014)
[damac / dareen weyn] - Xigasho:
Waxaan baarnay 51 dumar ah IPU iyo 51 dumar ah oo isticmaala filimada aan qadka lahayn (NIPU). Iyadoo la adeegsanayo su'aalaha, waxaan qiimeynay darnaanta balwadda cybersex guud ahaan, iyo sidoo kale u nuglaanta kacsiga galmada, dabeecadaha guud ee galmada ee dhibaatada leh, iyo darnaanta calaamadaha nafsiga ah. Intaa waxaa sii dheer, qaab tijaabo ah, oo ay kujirto qiimeyn kacsanaan ah oo ah 100 sawirro qaawan, iyo sidoo kale tilmaamayaal damac leh, ayaa la qabtay. Natiijooyinku waxay muujiyeen in IPU ay ku qiimeeyeen sawirrada qaawan inay yihiin kuwo kacsi badan oo soo sheegay damac weyn sababtoo ah soo bandhigida sawir qaawan marka la barbar dhigo NIPU.
Intaa waxaa sii dheer, damacsanaanta, qiimeynta kacsiga galmada ee sawirada, xasaasiyadda kacsiga galmada, habdhaqanka galmada ee dhibaatada leh, iyo darnaanta calaamadaha nafsaaniga ah ayaa saadaaliyay u janjeera dhanka balwadda cybersex ee IPU. Xiriir ku ahaanshaha, tirada xiriirka galmada, ku qanacsanaanta xiriirka galmada, iyo isticmaalka isdhexgalka isdhexgalka lama xiriirin qabatinka internetka. Natiijooyinkani waxay la jaan qaadayaan kuwa lagu soo warramey ragga iyo dumarka isku jinsiga ah ee daraasadihii hore. Natiijooyinka la xiriira xoojinta dabeecadda kacsiga galmada, qaababka barashada, iyo doorka falcelinta iyo rabitaanka horumarinta qabatinka cybersex ee IPU waxay u baahan tahay in laga wada hadlo.
12) Tixgelinno Ammaan ah iyo Tixgelin Tixgelin ah oo ku Saabsan Cilaaqaadka Ku Saabsan Cudurrada Cybersex Marka Laga Hayo Aqoonta Aqoonta Aqoonta (Laier et al., 2014)
Dabeecada dhacdooyinka badanaa waxaa loo yaqaan 'cigartsex' (CA) iyo hababka horumarka ayaa laga wada hadlay. Shaqada hore waxay soo jeedinaysaa in shakhsiyaadka qaarkood laga yaabo inay u nugul yihiin CA, iyada oo xoojinta waxqabadka iyo dabiiciga waxqabadka loo tixgelinayo inay yihiin habka ugu muhiimsan ee horumarinta CA. Daraasaddan, 155 heterosexual rages ayaa ku qiimeeyay sawirada xornimaadka 100 waxayna muujiyeen korodhkooda kufsiga jinsiga. Waxaa intaa dheer, dareenka dhinaca CA, dareenka xayiraadda galmada, iyo isticmaalka aan caadiga ahayn ee galmada guud ahaan waa la qiimeeyay. Natiijooyinka baadhitaanku waxay muujinayaan in ay jiraan waxyaabo ay u nugul yihiin CA-da iyo in la keeno caddayn ku saabsan doorka jinsiga iyo waxqabadka aan kala go'a lahayn ee horumarinta CA.
13) Cusbooneysiinta, Xaaladaynta iyo Feejignaanta Xeeladaha ee Abaalmarinta Abaalmarinta (Banca iyo al., 2015)
[damac weyn / dareen-celin iyo habeyn / dareen-celin] - Daraasad kale oo Jaamacadda Cambridge fMRI ah. Marka loo barbardhigo xakamaynta dadka ladagaallanka ah waxay doorbiday sheeko galmo iyo tilmaamo shardi leh oo laxiriira porno Si kastaba ha noqotee, maskaxda dadka ladagaallanka ah ee ladagaallanka ah waxay si dhakhso leh ugu dhaqmaan sawirrada galmada. Maaddaama doorbidnimada cusubi aysan ahayn mid horay u jirtay, waxaa la rumeysan yahay in qabatinka suuxdintu uu wado riwaayad cusub oo isku day ah in looga adkaado caado ahaanta iyo u nuglaanshaha.
Akhlaaqda galmada ee qasabka ah (CSB) waxay la xiriirtay doorbidii hore ee jinsiga ah ee jinsiga, marka la barbardhigo sawirada xakamaynta, iyo doorbid guud oo loogu talagalay amarrada ku salaysan sinjiga iyo lacagta ka soo horjeeda natiijooyinka dhexdhexaadka ah marka la barbar dhigo mutadawiciinta caafimaadka. Shakhsiyaadka CSB-da waxay sidoo kale heleen habeyn dheeraad ah oo ay ku sameeyaan sawirrada lacagta lagu soo rogo ee galmada oo ay la socdaan heerka qadarinimada ee la xidhiidha doorbididda kordhinta jinsiga. Dabeecadaha soo dhoweynta ee calaamadaha kufilan jinsiga la kala diri karo ee doorbididda doorbidu waxay la xidhiidhaa horey u fiirsashada indhaha ee jinsiga. Daraasaddan ayaa muujinaysa in shakhsiyaadka CSB ay leeyihiin doorbid aan fiicnayn oo la xoojiyey oo loo cusbooneysiinayo faraxumeynta jinsiga oo ay dhici karto in ay dhexdhexaadinayso habitansiga xajmiga ah iyada oo la sii wanaajinayo xoojinta qaboojinta.
Qodob ah laga soo xigtay war-saxaafadeedka la xiriira:
Waxay ogaadeen in marka gabadha galmada loo arko sawir jinsi isku mid ah, marka la barbar dhigo kuwa mutadawiciin caafimaad qaba waxay la kulmeen hoos u dhac dhaqdhaqaaqeed ee gobolka maskaxda oo loo yaqaano cortex xuddun dhejis ah, oo loo yaqaano inuu ku lug lahaado abaalmarinta iyo dhacdooyin cusub. Tani waxay u dhigantaa 'habituation', halkaasoo qofkasto u helayo kobcinta isla markaana ka yar yareeyo - tusaale ahaan, qaxwaha cabaha ayaa laga yaabaa in laga helo koobka 'kafateeriga' ee koobkooda koobaad, laakiin waqti ka badan inta badan waxay cabaan kafeega, yaraanta buzzu wuxuu noqonayaa
Saameyntan habeyntan ayaa waxay ku dhacdaa ragga ragga qaba oo si joogta ah u muujiyay fiidiyoow isku mid ah. Laakiin marka ay daawadaan video cusub, heerka xiisaha iyo arousal waxay ku laabtaan heerka asalka ah. Tani waxay ka dhigan tahay, in laga hortago habnololeedka, qofkastoo jinsiga ah wuxuu u baahan yahay inuu raadsado muuqaal joogto ah oo sawirro cusub ah. Si kale haddii loo dhigo, habeyntu waxay ku wadi kartaa raadinta sawirro cusub.
"Natiijadeenu waxay si gaar ah ugu lug leedahay qaabka sawir-gacmeedka ah ee" pornography online, "ayaa intaa raaciyay Dr Voon. "Ma cadda sababta ay u kicineyso isticmaalka jinsiga galmada ee ugu horreysa waxayna u badan tahay in dadka qaarkiis ay horay u-qabsadeen macaamilka dadka kale, hase yeeshee sida muuqata aan muuqan ee sawirrada jinsiga ah ee laga heli karo internetka waxay caawineysaa inay quudiyaan ciyaalkooda, way adag tahay in la baxsado. "
14) Dhibaatooyinka Naasirnimada ee Dhiirigga Jinsiga ee Shakhsiyaadka leh Habdhaqan Cilad-celin-darro ah (Seok & Sohn, 2015)
[fal-celin weyn oo dareen-celin / dareen-celin iyo wareegyo horudhac ah oo aan shaqeynin] - Daraasaddan fMRI ee Kuuriyada Kuuriya waxay soocelinaysaa daraasado kale oo maskaxda ah oo ku saabsan dadka isticmaala sigaarka Sida daraasadda Jaamacadda Cambridge waxay heshay qaabab firfircoon oo maskaxeed oo maskaxeed ku saleysan galmada, taas oo u eg qaababka daroogada daroogada. Iyadoo la raacayo daraasado dhowr ah oo Jarmal ah waxay ka heshay wax ka beddelka kiliyaha hore ee u dhigma isbeddelada lagu arkay dadka balwada leh. Waxa cusubi waa in natiijooyinka ay iswaafajiyeen qaababka firfircoonida kiliyaha hore ee lagu arkay daroogada balwadaha: Falcelin weyn oo falcelin ah oo ku saabsan sawirrada galmada ayaa weli la joojiyay jawaabaha waxqabadyada kale ee caadiga ah. Qayb ka mid ah:
Daraasaddeena waxaa loola jeedaa in lagu baaro xiriirka jismiyeed ee jinsiga ah ee rabitaanka galmada iyadoo lala xiriirinayo dhacdooyinka sawirka maskaxda ee farsamada (fMRI). Labaatan iyo saddex qof oo qaba kontoroolka caafimaadka sanadka ee PHB iyo 22 ayaa la baaray intii ay si ba'an u egyihiin dareenka galmada iyo kuwa aan habooneyn. Heerarka maadooyinka 'rabitaanka galmada' waxaa loo qiimeeyay sidii ay uga jawaabi lahaayeen dhiirigelin galmo kasta. Xeerka xakamaynta, shakhsiyaadka qaba PHB waxay la kulmeen rabitaan galmo oo aad u fara badan oo kordhay markii ay la kulmeen dareenka galmada. Waxqabadka ballaaran ayaa lagu arkay nucleus caudate, lobe lear paleetal, dharbaaxo anterior cingulate gyrus, thalamus, iyo kortex doorbida horjeeda horjooge ee PHB kooxda marka loo eego kooxda control. Intaa waxaa dheer, qaababka hemodynamic ee goobaha firfircooni way kala duwan yihiin kooxaha dhexdooda. Iyadoo la raacayo natiijooyinka baadhitaanada maskaxda ee baadhitaanka walxaha iyo dabeecadda dhaqanka, shakhsiyaadka leh dabeecadaha habdhaqanka ee PHB iyo rabitaanka sii kordhay ayaa muujiyay isbeddelada isbeddelka ee kordhiska iyo gobollada hoose
15) Is-beddelka Wax-qabadka Musuqmaasuqa ah ee Sawirrada Galmada ee Dadka Isticmaala Dhibaatooyinka iyo Xakamaynta Iskudheellitir la'aanta "Muuqaalka Muuqaalka" (Horudhac iyo wakhti., 2015)
[habituation] - Daraasad labaad oo EEG ah oo ka socota Kooxda Nicole Prause ee kooxda. Daraasadani waxay barbar dhigtay maadooyinka 2013 Steele et al., 2013 ilaa koox la hubo oo xakameysan (weli waxay ka jirtey cilladaha kor lagu soo sheegay). Natiijooyinka: Marka la barbardhigo kantaroolka "shaqsiyaadka la kulma dhibaatooyin ku habboon aragtida muuqaalkooda" waxay yareeyeen jawaabaha hoose ee maskaxda si ay hal mar ugu soo dhacaan sawirro gaaban vanilla ah. The qora hogaamiye waxay sheegaysaa natiijooyinkan "mukhadaraad fara badan." Maxaa cilmi-baaris sharci ah ku andacoonaya in daraasadahooda lafdhabarka ahi ay debciyeen cilmi baaris ku salaysan oo wanaagsan?
Dhab ahaantii, natiijooyinka Horudhac iyo wakhti. 2015 si fiican ugu habboon Kühn & Gallinat (2014), taas oo ka dhigtay in isticmaalka suufka badani uu xiriir la leeyahay firfircooni yar oo maskaxeed oo looga jawaabayo sawirrada porno-vanilla. Horudhac iyo wakhti. Natiijooyinka ayaa sidoo kale la socda Banca iyo al. 2015 taas oo ah #13 liiskaan. Intaa waxaa dheer, Daraasad kale oo EEG ah waxay ogaatay in isticmaalka suufka weyn ee haweenka uu xiriir la leeyahay firfircoonida maskaxda ee yar. Akhrinta hoose ee 'EEG' waxay ka dhigan tahay in maadooyinka ay fiiro gaar ah u leeyihiin sawirrada. Si fudud u dhig, dadka isticmaala lebbiska badan ayaa loo jilciyey sawirro muuqaal ah oo ka yimaada porno vanilla. Way caajiseen (waa la caadeystey ama la nacay). Fiiri tan talabixin ballaaran YBOP. Todoba waraaqo oo dib loo eegay ayaa isku raacay in daraasaddaani ay dhab ahaantii ka heshay fadeexo / habitunsi dadka isticmaala curyaanka oo badanaa (waafaqsanaanta takoorka): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
16) Xakamaynta Neefsashada HPA ee Ragga ah ee leh Dhibaato Ba'an (Chatzittofis, 2015)
[jawaab celin cadaadis aan fiicnayn] - Daraasad ay la socoto 67 rag iyo dumar ah oo qabatimay galmada iyo kontaroolada da'da ku habboon. Hypothalamus-Pituitary-Adrenal (HPA) dhidibka ayaa ah udub-dhexaadka udub dhexaadka jawaab celinta walaaca. Balwadaha wuxuu bedelaa wareegyada maskaxda ee maskaxda taasoo keentay farsamada HPA ee aan shaqaynayn. Daraasaddan ku saabsan dadka galmada ku xeeldheer (hypersexuals) waxay heleen jawaabta isbedelka cadaadiska oo muraayad u helaya natiijooyinka mukhaadaraadka. War-saxaafadeed ka soo baxay war-saxaafadeed:
Daraasaddan ayaa ku lug lahayd ragga 67 ee qaba xanuunka hypersexual iyo 39 ee la xakameeyey caafimaadkooda. Ka qaybqaatayaashu waxay si taxadar leh u heleen cilad muruqa ah iyo waxyeellada isku-buuqsan ee murugada ama caruurnimada caruurnimada. Cilmi-baadhayaashu waxay iyaga siiyeen qiyaas hoose oo ah dexamethasone fiidkii ka hor intaan baaritaanka lagu joojinin jawaabta culeyska maskaxeed, ka dibna subaxdii ayaa qiyaastay heerka heerarka cadaadiska hoormoonada ee cortisol iyo ACTH. Waxay ogaadeen in bukaanada qaba xanuunka 'hypersexual' ay leeyihiin heerar sare oo hormoonnada noocan oo kale ah marka loo eego kantaroolka caafimaadka leh, farqiga udhaxeeya xitaa ka dib markii la kantaroolo niyad jabka iyo xanuunka caruurta.
"Xeerarka cadaadiska Aberande ayaa horey loogu arkay bukaanka niyadjabsan iyo kuwa isdilka ah iyo sidoo kale kuwa xadgudubka sameeya," ayuu yiri Professor Jokinen. "Sannadihii ugu danbeeyay, diiradda ayaa waxay aheyd in dabeecadda caruurnimadu ay u horseedi karto nidaamka cadaadiska jirka ee loo yaqaanno" epigenetic systems ", si kale haddii loo dhigo sida deegaankooda nafsaani-bulsheedku saameyn ku yeelan karaan gen ee maamula nidaamyadan. cilmi-baarayaasha, natiijooyinka waxay soo jeediyeen in nidaamka isku-midka ah ee neurobi-ga ee ku lug leh nooc kale oo xadgudub ah uu khuseeyo dadka qaba xanuunka 'hypersexual disorder'.
17) Xakamaynta horudhaca ah iyo qabatinka internetka: Qaabka naqshadda iyo dib-u-eegista natiijooyinka neuropsychological iyo neuroimaging (Brand et al., 2015)
[wareegyada hore ee aan shaqeynin / shaqada fulinta saboolka ah iyo dareenka] - Caddayn:
Iyadoo la raacayo tan, natiijooyinka ka imanaya neerfaha iyo daraasadaha kale ee cilmu-nafsiga ayaa muujinaya in fal-celinta, damacsanaanta, iyo go'aan gaarista ay yihiin fikradaha muhiimka u ah fahamka qabatinka internetka. Natiijooyinka ka soo baxa dhimista maamulka fulinta waxay la jaan qaadayaan waxyaalaha kale ee la qabatimay, sida khamaarka noolaha. Waxay sidoo kale xooga saaraan kala soocida ifafaalaha sida balwadda, maxaa yeelay waxaa sidoo kale jira dhowr isku mid ah oo laga helo natiijooyinka ku tiirsanaanta walaxda. Intaa waxaa sii dheer, natiijooyinka daraasadda hadda jirta waxay u dhigmayaan natiijooyinka ka soo baxa cilmi-baarista ku-tiirsanaanta walxaha waxayna xoogga saaraan isbarbardhiga u dhexeeya qabatinka cybersex iyo walxaha ku tiirsanaanta ama balwadaha kale ee akhlaaqda
18) Ururrada aan tooska ahayn ee ku-qabsashada cybersex-ka: Isku-dubarida Imtixaanka Ururrada aan tooska ahayn ee sawirrada muuqaalka (Snagkowski et al., 2015)
[damac / dareen weyn] - Caddayn:
Daraasadihii ugu dambeeyay waxay muujinayaan isku ekaanshaha isticmaalka cybersex qabatinka iyo walxaha ku tiirsan waxayna ku doodayaan in loo kala saaro qabatinka cybersex sida qabatinka akhlaaqda. Ku tiirsanaanta walxaha, ururada aan tooska ahayn waxaa lagu yaqaan inay door muhiim ah ka ciyaaraan, iyo ururada caynkaas oo kale ah laguma baran barashada internetka, illaa iyo hadda. Daraasaddan tijaabada ah, kaqeybgalayaasha ragga iyo dumarka ah ee 128 waxay dhammaystireen Imtixaan Isbahaysi Iskudhaf ah (IAT; Greenwald, McGhee, & Schwartz, 1998) oo lagu beddelay sawirro qaawan. Dheeraad ah, dabeecadaha galmada ee dhibaatada leh, dareenka ku saabsan kacsiga galmada, u janjeerida qabatinka cybersex, iyo ujeedo shakhsiyadeed sababtoo ah daawashada sawirrada qaawan ayaa la qiimeeyay.
Natiijooyinka ayaa muujinaya xiriir wanaagsan oo dhexmara ururada sawirrada qaawan ee sawirrada qaawan oo leh shucuur qumman iyo u janjeeridda qabatinka internetka, dabeecadda galmada ee dhibta leh, dareenka ku aaddan raalligelinta galmada iyo sidoo kale damac maskaxeed. Intaas waxaa sii dheer, falanqayn qunyar socod ah oo muujineysa in shaqsiyaadka ka warbixiyay damac aad u sareeya oo muujiyey xiriirro muuqata oo muuqaal ah oo sawirro qaawan ah oo leh shucuur wanaagsan, gaar ahaan ku wajahan qabatinka internetka. Natiijooyinka ayaa soo jeedinaya doorka suurtagalka ah ee ururada saxda ah ee leh sawirro qaawan oo ku saabsan horumarka iyo dayactirka balwadda ee internetka. Intaa waxaa dheer, natiijooyinka daraasadda hadda la barbardhigi karo natiijooyinka laga helay cilmi-baarista ku-tiirsanaanta walaxda isla markaana xoogga saaraya is-barbardhiga u dhexeeya maandooriyaha cyberex iyo ku-tiirsanaanta walaxda ama dabeecadaha kale ee balwadda.
19) Calaamadaha macaamiisha cybersexku waxay ku xiran yihiin labadaba iyo ka-hortagga dareenka "pornographic": natiijooyinka ka soo baxa tusaale analog ah ee dadka isticmaala cybersex caadiga ah (Snagkowski, et al., 2015)
Qaar ka mid ah wajiyada ayaa tilmaamaya isku midka ah mawduucyada ku xirnaanaya walxaha hababka / ka-hortagga ujeedooyinka inay yihiin farsamooyin muhiim ah. Qaar badan oo cilmi-baarayaal ah ayaa ku dooday in gudahood xaalad go'aan qaadasho oo la xidhiidha daroogada, shakhsiyaadku waxay muujin karaan dareen-celin si ay u wajahaan ama uga fogaadaan dareemayaasha la xiriira daroogada. Daraasaddan xaadirka ah 123 ragga ragga ah waxay dhammeeyeen Horumarka-Ka-Hashar-Hawl-qabasho (AAT; Rinck iyo Becker, 2007) lagu sameeyay sawirro muuqaal ah. Intii lagu guda jiray ka qaybgalayaasha AAT waxay ku qasbanaadeen inay ku riixaan dareen-wadaha casriga ama ka soo jiidaan iyaga oo leh jilaan. Dareenka ku aaddan xayiraadda galmada, dabeecada galmada ee dhibaatada leh, iyo dareenka kuyeelashada mishiinka cybersexka ayaa lagu qiimeeyay su'aalaha.
Natiijooyinka waxay muujinayeen in shakhsiyaadka leh dareenka ku aaddan qabatimaadka cybersex-ka ay u adeegsadeen habab ama ka fogaanayaan dareenka faafinta. Waxaa intaa sii dheer, falanqaynta caadifad-darrada ah waxay muujisay in shakhsiyaadka kufsiga jinsiga ah iyo habdhaqanka galmada ee dhibaatada leh ay muujinayaan jihooyinka sare / ka-hortagida, ayaa sheegay in calaamadaha sare ee cybersex qabatinka. Isbarbardhigga ku-xirnaanshaha maandooriyaha, natiijooyinka waxay soo jeedinayaan in labadaba hababka iyo ka-hortagga labadaba laga yaabo inay door ka qaataan isticmaalka maandooriyaha. Intaa waxaa dheer, isdhexgalin ku saabsan dareenka galmada ee galmada iyo habdhaqanka galmada ee dhibaatada leh waxay yeelan karaan saameyn isku dhafan oo ku saabsan darnaanta cabashooyinka asaasiga ah ee nolol maalmeedka sababtoo ah isticmaalka cybersex. Natiijooyinka waxay keenaan caddayn dheeraad ah oo loo adeegsado calaamadaha ku xirnaanshaha cybersex iyo walxaha ku xiran walaxaha. Xayeysiisyada noocan oo kale ah ayaa dib loogu soo celin karaa habdhaqanka neeriga ah ee cybersex- iyo tilmaamaha la xiriira daroogada.
20) Helitaanka xayawaanka? Feejignaanta ama dayacidda baaqyada cyberers ee xaalad badan oo isku dhafan waxay la xiriiraan calaamadaha xanuunka cybersex (Schiebener et al., 2015)
[damac / dareen weyn iyo xakameyn fulin liidata] - Caddayn:
Qaar ka mid ah shakhsiyaadka waxay isticmaalaan waxyaabaha la isku yiraahdo internetka, sida sheekada pornographic, hab dhaqan ah, taas oo keenta cawaaqib xun oo ku yimaada nolosha gaarka ah ama shaqada. Mid ka mid ah farsamooyinka horseedi kara cawaaqib xun waxa laga yaabaa in la yareeyo kantaroolka maamulka ee ku saabsan garashada iyo dabeecadaha kuwaas oo laga yaabo in loo baahdo si loo xaqiijiyo isbedelka ujeedada ujeedada u dhexeeya isticmaalka internetka iyo hawlaha kale iyo waajibaadka nolosha. Si aan wax uga qabanno arrintan, waxaanu ka baashaalayaasha kaqeybgalayaasha ah ee 104 oo ay ku jiraan laba qaybood oo kala duwan oo isugu jira: Qaar ka mid ah sawirrada dadka, kuwa kale ayaa ka kooban sawirro muuqaal ah. Labadooduba waxay dejiyaan sawirada si loo kala saaro shuruudaha qaarkood. Ujeedada cad waxay ahayd in ay ka shaqeeyaan dhammaan hawlaha kala-soocidda si siman oo siman, iyagoo bedelaya shaqada iyo kala-soocidda qaybaha si siman.
Waxaan ogaanay in waxqabadka yar ee isku dheelitirka ee is-dhaafsiga badanaa ay la xiriirto ficil dheeraad ah oo ku aaddan qabatimaadda cybersex. Dadkani waxa ay inta badan ka baqayaan ama la dayacay iyagoo ka shaqeynaya sawirada sawirada. Natiijooyinku waxay muujinayaan in hoos loo dhigo koontaroolidda fulinta waxqabadka badan ee waxqabadka leh, marka lagu wajaho qalabka feylka ah, waxay gacan ka geysan kartaa dabeecadaha aan fiicnayn iyo cawaaqibyada xun ee ka yimaada cybersex qabatinka. Si kastaba ha noqotee, shakhsiyaadka leh dareenka ku xirnaanshaha cybersex waxay u egtahay in ay heystaan ​​rabitaan si ay uga fogaadaan ama u la socdaan walxaha pornographic, sida lagu falanqeeyay qaababka dhiirigelinta ee mukhaadaraadka.
21) Ganacsi Later abaalmarin loogu talagalay hadafka hada jira: Isticmaalka sawir gacmeedka iyo dib u dhigista qiimaha (Negash et al., 2015)
[xakamaynta saboolka ee saboolka ah: Tijaabada sababta] - Calaamadaha:
Daraasadda 1: Kaqeybgalayaashu waxay dhammaystireen su'aalo-waydiin sawir-gacmeed ah iyo hawsha dhimista dib-u-dhaca Waqtiga 1 kadibna markale afar toddobaad kadib. Kaqeybgalayaasha ka warbixinaya isticmaalka filimada qaawan ee bilowga ah waxay muujiyeen sicir-dhimis dib-u-dhac sare Waqtiga 2, iyagoo xakameynaya dhimista daahitaanka hore. Daraasada 2: Kaqeybgaleyaasha ka aamusay filimada qaawan waxay muujiyeen qiimo dhimis daahitaan ka yar kaqeybgalayaasha ka aamusay cuntada ay jecelyihiin.
Farshaxanka Internetka waa abaalmarin jinsi ah oo keenaya in dib loo dhigo kala duwanaansho si ka duwan sida abaalmarinta dabiiciga ah ee kale, xitaa marka isticmaalka uusan ahayn mid qasab ah ama qabatimay. Daraasadani waxay samaysaa qayb muhiim ah, oo muujinaysa in saameyntu ay ka baxsan tahay arousal ku meel gaar ah.
Isticmaalka sawir-gacmeedka waxaa laga yaabaa inuu bixiyo jacayl galmo degdeg ah balse wuxuu yeelan karaa saameyn ku yeelan kara oo saameynaya meelaha kale ee nolosha qofka, gaar ahaan xiriirka.
Natiijadu waxay soo jeedinaysaa in sawir-gacmeedka internetka uu yahay abaal-marin jinsi ah oo keenaya in dib loo dhigo kala duwanaansho si ka duwan sida abaalmarinta dabiiciga ah ee kale. Sidaas daraadeed waa muhiim in la daaweeyo filimada sawir ahaan sida kobcinta gaarka ah ee abaalmarinta, dareenka, iyo barashada mukhaadaraadka iyo sida loo isticmaalo si shakhsi ahaaneed iyo sidoo kale daaweyn isku xiran.
22) Kacsanaanta Galmoodka iyo Kala Qaybsashada Qalalaasaha La Xiriira Saameynta Cybersex ee Xanuunka Khaniisiinta (Laier et al., 2015)
Natiijooyinka dhowaan la soo saaray waxay muujiyeen xiriir ka dhexeeya dar darnaan la'aanta 'CyberSex Addiction' (CA) iyo tilmaamayaasha ikhtiyaar u-yeelashada galmada, iyo in laqabsashada dabeecadaha galmada ay dhexdhexaadisay xiriirka ka dhexeeya cudur-daarka galmada iyo calaamadaha CA. Ujeeddada daraasaddan ayaa ahayd in lagu tijaabiyo dhexdhexaadinta tusaale ahaan ragga khaniisiinta ah. Foomka su'aalaha waxaa lagu qiimeeyaa calaamadaha CA, dareenka fekerka xad-dhaafka galmada, dhiirigelinta adeegsiga qaawan, dabeecadda galmada ee dhibta leh, astaamaha nafsadda, iyo dabeecadaha galmada nolosha dhabta ah iyo khadka tooska ah. Intaa waxaa dheer, kaqeybgalayaashu waxay arkeen fiidiyowyada qaawan iyo waxay muujiyeen dareen galmo ahaan ka hor iyo ka dib soo bandhiga fiidiyowga.
Natiijooyinka ayaa muujiyay xiriir adag oo ka dhexeeya astaamaha CA iyo tilmaamayaasha kicinta galmada iyo ka fogaanta galmada, u adkeysiga dabeecadaha galmada, iyo astaamaha nafsadda. CA lama xidhiidhin habdhaqanka galmada ee tooska ah iyo usbuuca usbuuca isticmaalka wakhtiga internetka. Sida loola dhaqmo dabeecadaha galmada qayb ahaan dhexdhexaadinta xiriirka ka dhexeeya reebitaanka galmada iyo CA. Natiijooyinka ayaa la barbar dhigayaa kuwii lagu soo warbixiyay ragga iyo dumarka isku jinsiga ah ee daraasadihii hore waxaana laga wada hadlayaa asal ahaan fikradaha fekerka ah ee CA, kuwaas oo muujinaya doorka xoojinta togan iyo mid taban sababo la xiriira isticmaalka internetka.
23) Doorka Neuroinflammation ee Pathophysiology ee Khasaarada Hypersexual (Jokinen et al., 2016)
[jawaab celinta cadaadiska aan shaqeynin iyo neuro-bararka] - Daraasadani waxay soo warisay heerar sare oo ku wareegaya Tumor Necrosis Factor (TNF) ee kufsiga galmada marka la barbar dhigo kantaroolka caafimaadka leh. Heerarka sare ee TNF (calaamadee caabuq) ayaa sidoo kale laga helay maandooriyeyaasha maandooriyaha ah iyo xayawaanka daroogada la qabatimay (khamriga, heroin, meth). Waxaa jiray isku xirnaan xoogan oo udhaxeysa heerarka TNF iyo qiyaasta qiimeynta cabirnaanta.
24) Dabeecadda Isku Galmoodka Isku Galmoodka: Maqnaanshaha Hoose iyo Limbic iyo Isdhexgalka (Schmidt et al., 2016)
[wareegyada hore ee aan shaqeynin iyo dareenka] - Tani waa daraasad fMRI ah. Marka loo barbardhigo kantaroolka caafimaadka leh ee maadooyinka CSB (kuwa balwada leh) waxay kordhiyeen mugga amygdala bidix waxayna yareeyeen isku xirnaanta shaqada ee udhaxeysa amygdala iyo kiliyaha hore ee dorsolateral DLPFC. Yaraynta isku xirnaanta shaqada ee udhaxeysa amygdala iyo kiliyaha hore waxay la jaanqaadeysaa mukhaadaraadka walaxda. Waxaa loo maleynayaa in isku xirnaanta saboolka ahi ay yareyneyso xakamaynta koontada hore ee xakamaynta adeegsadaha si uu ugu lug yeesho dhaqanka balwadda.
Daraasadani waxay soo jeedineysaa in sunta daroogada ay u horseedi karto arrin cawlan oo yar sidaas darteedna ay yareyso mugga amygdala ee daroogada qabatimay. Amygdala waa mid si joogto ah u firfircoon inta lagu jiro daawashada galmada, gaar ahaan inta lagu gudajiro bilowga muuqaalka galmada. Waxaa laga yaabaa in cilaaqaadka galmada joogtada ah iyo raadinta iyo raadinta ay horseed u tahay saameyn gaar ah amygdala ee dadka isticmaala sigaarka qasabka ah. Beddel ahaan, sanado badan oo mukhaadaraad ah iyo cawaaqib xumo xun ayaa aad u walaac badan - iyo cculeyska bulsheed ee dabadheeraadku wuxuu la xiriiraa hannaanka amygdala ee kordhay. Baro #16 ee kor ku xusan waxay ogaadeen in "jinsiga galmada" ay leeyihiin nidaam cadaadis ah oo xad-dhaaf ah. Diiqada daba dheeraaday ee la xidhiidha qabatinka jinsiga / jinsiga, iyo waxyaabo keenaya jinsi gaar ah, ayaa keenaya mugga weyn ee amygdala? Diido:
Natiijooyinkayagu hadda waxay muujinayaan mugga sare ee gobol ku lug leh salience dhiirigelin iyo isku xirnaanta gobolka nasashada ee shabakadaha xakamaynta xakamaynta hore iyo hoos. Carqaladeynta shabakadaha noocan oo kale ah waxay sharxi kartaa astaamaha habdhaqanka aberrant ee abaalmarinta jawiga deegaanka ama falcelinta la xoojiyay ee tilmaamaha dhiirigelinta muuqaalka leh. In kasta oo natiijooyinkayaga mugga ahi ka duwan yihiin kuwa ku jira SUD, natiijooyinkani waxay ka tarjumayaan kala duwanaansho ahaan shaqaynta saameynta neerfaha ee daroogada joogtada ah. Caddaynta soo ifbaxaysa waxay soo jeedinaysaa suurtagalnimada isku-dhafan ee habka balwadda gaar ahaan taageeridda aragtiyaha dhiirrigelinta dhiirrigelinta.
Waxaan soo bandhignay in waxqabadka shabakadan salience-ka kadib la wanaajiyay ka dib soo-gaadhista astaamo aad u sarreeya ama doorbidaya tilmaamo jinsi oo cad [Brand et al., 2016; Seok iyo Sohn, 2015; Voon v al., 2014] oo ay la socdaan xakameyn feejignaan leh [Mechelmans et al., 2014] iyo rabitaan gaar ah oo ku saabsan cyo jinsi ah laakiin ma ahan guud ahaan rabitaanka galmada [Brand et al., 2016; Voon v al., 2014]. Fikradaha loo baahanyahay in lagu muujiyo tilmaamaha galmada ee jinsiga ah ayaa sii dheeraanaya doorbidista jilicsanaanta jinsiga leh sidaas oo ay xaqiijinayaan xiriirka ka dhexeeya habdhaqanka galmada iyo indho-indheynta [Banca et al., 2016].
Natiijooyinkaan ku saabsan waxqabadka la xoojiyay ee la xiriira tilmaamaha ku saleysan galmada waxay ka duwan yihiin natiijada (ama kicinta aan shuruud lahayn) taas oo habeyn wanaagsan, oo suurtogal ah inay la socoto fikradda dulqaadka, waxay kordhisaa doorbidida dhiirrigelinta galmada cusub [Banca et al., 2016]. Wadajirta natiijooyinkani waxay ka caawiyaan helitaanka habdhiska neerobika ee CSB ee u horseedaya faham weyn oo ku saabsan cilladda iyo aqoonsiga calaamadaha daweynta suurtagalka ah.
25) Waxqabadka Stritium ee Ventral-ka marka la daawanayo sawirada qatarta ah ee sawir-qaadashada ayaa la xidhiidhaa calaamadaha qaawan ee filimada internetka (Brand et al., 2016)
[fal-celinta ugu weyn ee dareenka / dareenka] - Daraasad fMRI Jarmal ah. Raadinta # 1: Waxqabadka xarunta abaal-marinta (ventral striatum) ayaa ka sarreeyay sawirrada sawir-gacmeedka la jecel yahay. Raadinta # 2: Falcelinta Ventral striatum waxay la xiriirtaa dhibcaha qabatinka galmada ee internetka. Labada natiijadoodba waxay muujinayaan xasaasiyad waxayna la jaan qaadayaan habka takoorka. Qorayaashu waxay sheegaan in "Naas-nuujinta asaasiga ah ee khatarta fayraska ee internetka ay la barbardhigi karto macaamilada kale." Diidmo:
Nooc ka mid ah isticmaalka internetku waa isticmaalka sigaar-cabista xad-dhaafka ah, oo loo yaqaan 'cybersex' ama 'online pornography'. Daraasadaha neuroimaging waxaa laga helaa waxqabadka "ventral striatum" marka ay ka qaybgalayaashu daawanayaan dareenka jinsiga ah ee cad oo la barbardhigay qalab aan galmo ahayn / erotic ah. Waxaan hadda ka fikireynaa in qormada Ventral-ka ay tahay in ay ka jawaabto sawirada la jecel yahay marka la barbardhigo sawirada sawirada aan la jecleystin iyo in ficil-celinta isugeyneed ee isku-dheelitirka ee isku-dheelitirka ay tahay in lala xiriiriyo astaamaha asturnaanta ee qadiimka. Waxaan ka soo qayb galnay rag ka tirsan 19 heterosexual oo leh sawir muuqaal ah oo ay ku jiraan walxaha la jecel yahay iyo kuwa aan la jecleysan.
Sawirada laga soo qaaday qaybta la door bidaa ayaa lagu qiimeeyay sida badan oo kacsan, aan fiicneyn, iyo kudhawaansho fiican. Jawaabcelinta Ventral-ka ayaa ahaa mid aad u xoogan marka loo eego sawirada aan la door bidnayn. Dhaqdhaqaaqa Ventral-ka ee wax-ka-beddelkaasi waxay la xidhiidhaan calaamadaha isku-ka-sheegka ee qaawanaanta qaawaanka internetka. Astaamaha shakhsiyadeed ee shakhsi ahaaneed waxay sidoo kale ahayd saadaalinta muhiimka ah ee falanqaynta isbeddelka ee jawaabcelinta ventral striatum oo ah isbeddel ku tiirsan iyo astaamaha asturnaanta ee qaawanaanta qaawan ee internetka, xiisaha jinsiga guud, dabeecada cakiran, niyad-jabka, dareenka dadka, iyo dhaqanka galmada maalmaha ugu dambeeya sida saadaasha . Natiijooyinku waxay taageeraan doorka doorka ventral-ka ee farsameynta abaal-marinta iyo abaal-marinta la xidhiidha walxaha pornografiga ah ee la jecel yahay. Mashruucyada ku saabsan abaalmarinta abaal-marinta ee striatum waxaa laga yaabaa inay ka qaybqaato sharraxaadda maskaxda ee sababta shakhsiyaadka leh doorashooyinka qaarkood iyo khiyaaladda galmada ay halis ugu jiraan inay lumiyaan xakamaynta isticmaalka suuqyada internetka.
26) Xaaladda Isticmaalka Dib u Habeynta iyo Xidhiidhka Naasnimada ee Mawduucyada leh Dabeecad Isku-Digniin ahaan Galmo (Klucken et al., 2016)
[fal-celinta ugu weyn ee dareenka / dareenka iyo wareegyada hore ee aan shaqeynin] - Daraasaddan fMRI ee Jarmalka ayaa ku celisay laba natiijooyin waaweyn Voon vd, 2014 iyo Kuhn & Gallinat 2014. Natiijooyinka Ugu Muhiimsan: Isku xirnaanta neerfaha ee qaboojinta cuntada iyo isku xirnaanta neerfaha ayaa lagu beddelay kooxda CSB. Sida laga soo xigtay cilmi-baarayaasha, isbeddelka ugu horreeya - xoojinta firfircoonida amygdala - ayaa laga yaabaa inay ka tarjumeyso qaboojinta la fududeeyay ("fiilooyin badan" oo ah calaamadihii hore ee dhexdhexaadka ahaa ee saadaaliyay sawirrada porno).
Isbedelka labaad - hoos udhaca isku xirnaanta udhaxeysa marinka mareenka iyo kiliyaha hore - wuxuu calaamad u noqon karaa awooda naafada ee xakameynta kicinta. Baarayaasha ayaa yiri, "Isbadaladaan" waxay la jaan qaadayaan daraasado kale oo baaraya isku xirnaanshaha neerfaha ee dhibaatooyinka balwadaha iyo cilladaha xakameynta kicinta. Natiijooyinka firfircoonida amygdalar ee tilmaamaha (dareenka) iyo yaraanta isku xirnaanta u dhexeeya xarunta abaalmarinta iyo kortex doorbid (hypofrontality) waa laba ka mid ah isbeddellada weyn ee maskaxda ee lagu arko walxaha maandooriyaha. Intaa waxaa dheer, 3 ee 20 dadka isticmaala xayawaanka compulsive waxaa ka soo jeeda "xajinta orgasmic-erection." An excerpt:
Guud ahaan, korodhka dhaqdhaqaaqa amygdala ayaa kor u kacay isla markaana hoos u dhigga iskudhafka ah ee iskudhafka ah ee PFC-ku wuxuu u ogolaanayaa ra'yiga ku saabsan jiritaanka iyo daaweynta CSB. Mawduucyada CSB waxay u muuqdeen kuwo aad u nugul inay abuuraan ururada u dhexeeya calaamadaha rasmiga ah ee dhexdhexaad ah iyo dareenka deegaanka ee ku haboon. Sidaa darteed, maaddooyinkaasi waxay u badan tahay in ay la kulmaan calaamad muujinaysa dabeecadda soo socota. Haddii ay tani keento CSB ama natiijo ka timid CSB waa in ay ka jawaabto cilmi baarista mustaqbalka. Waxaa intaa dheer, nidaamyada nidaamka naafanimada, kuwaas oo ka muuqda hoos-u-dhaca dhexdhexaadka ah ee iskudhufka-maskaxeed, waxay sii xoojin karaan ilaalinta dhaqanka dhibaatada leh.
27) Baaxad-darrada ka jirta Qodobka Xad-gudubka Xoolaha ee Daroogada iyo Abaalmarinta Daroogada (Banca iyo al., 2016)
[fal-celin weyn oo dareen-celin / dareen-celin ah, jawaabo xaaladaysan oo la xoojiyay] - Daraasaddan fMRI ee Jaamacadda Cambridge waxay isbarbardhigaysaa dhinacyada qasab ku ahaanshaha khamriga, kuwa cunnada badan, kuwa ciyaarta fiidyowga ah iyo kuwa balwadda leh (CSB). Qeybaha
Marka loo eego cudurrada kale, CSB marka la barbardhigo HV waxay muujisay helitaanka dhaqso badan si loo abaalmariyo natiijooyinka iyo iyada oo ay ku sii adkeynayso xaaladdeeda abaalmarinta iyadoo aan loo eegin natiijada. Maadooyinka CSB ma muujin wax khasaare ah oo ku yimaada is-beddelka ama barashada dib-u-dhaca. Natiijooyinkaas waxay la xidhiidhaan natiijooyinkeena hore ee doorbididda xoojinta ee dhiirigelinta xaalada ay ku jirto natiijooyinka galmada ama lacagaha, guud ahaan soo jeedinta xasaasiga ah ee dakhliga (Banca iyo al., 2016). Daraasado dheeraad ah oo la adeegsanayo abaalmarin la aqbalo ayaa lagu muujiyay
28) Cadaadiska Muuqaalka ah ee loogu talagalay Pornography iyo Iskuxidhka Jaaliyadaha ah Saadaalinta Tilmaamyada Tilmaamaha Qabsashada Cybersex ee Tusaale ah Isticmaalayaasha Cybersex ee caadiga ah (Snagkowski et al., 2016)
Ma jiro wax isku mid ah oo ku saabsan shuruudaha lagu ogaanayo isticmaalka maandooriyaha. Qaar ka mid ah qaababku waxay dib u dhigaan isbarbardhigga walxaha ku xiran walxaha, taas oo barashada jaanisku ay tahay farsamo muhiim ah. Daraasaddan, 86 heterosexual ragga waxay dhammaystireen "Standard Pavlovian" ee Hawlaha Bedelka Qalabka lagu bedelay sawirada "pornographic pictures" si ay u baaraan wax-barashada isku-duubnaanta ee macaamiisha cybersex. Intaa waxaa dheer, in si xeeldheer ujeedo ah loo fiiriyo sawirada sawirada iyo sawirada muuqaalka daroogada ee cybersex qaboojinta ayaa la qiimeeyay. Natiijooyinku waxay muujiyeen saameyn ku yeelashada shakhsi ahaaneed ee dareenka ah ee ku xirnaanshaha isticmaalka kumbuyuutarka, oo ay u dhaxeyso barashada jaaliyada.
Guud ahaan, natiijooyinkani waxay tilmaamayaan doorka muhiimka ah ee barashada wadashaqaynta ee kobcinta qabatinka maandooriyaha 'cybersex', iyadoo la siinayo cadaymo dheeri ah oo la taaban karo oo la mid ah udhaxgalka waxyaabaha maandooriyaha ah iyo qabatinka internetka. Marka la soo koobo, natiijooyinka daraasadda hadda socota waxay muujinayaan in barashada wadashaqayntu ay door muhiim ah ka ciyaari karto horumarinta balwadda internetka. Natiijooyinkayaga waxay soo bandhigayaan caddeyn dheeraad ah oo ku saabsan waxyaabaha u dhigma ee u dhexeeya maandooriyaha 'cybersex' iyo walxaha ku tiirsanaanta tan iyo markii la muujiyey saameynta rabitaanka maaddada iyo barashada la shaqeynta.
29) Isbeddelada niyadda ka dib daawashada filimada sawirrada ee internetku waxay ku xiran tahay calaamadaha Internetka-qaawan-fiirsashada (Laier & Brand,2016)
[damac / dareen weyn, jeclaansho la'aan] - Astaamaha:
Natiijooyinka ugu muhiimsan ee daraasaddan ayaa ah in u janjeersanaanta Internet Pornography Disorder (IPD) ay si xun ula xiriirtay dareemidda guud ahaan fiicnaanta, soo jeedka, iyo xasilloonida iyo sidoo kale si togan oo loo arko walaac laga qabo nolol maalmeedka iyo dhiirrigelinta isticmaalka filimada qaawan ee Internetka marka la eego xiisaha raadinta iyo ka fogaansho shucuur. Intaas waxaa sii dheer, u janjeera dhanka IPD waxay si xun ula xiriireen niyadda kahor iyo kadib daawashada filimada qaawan ee internetka iyo sidoo kale kororka dhabta ah ee niyadda wanaagsan iyo daganaanta.
Xidhiidhka ka dhexeeya u janjeedha xagga IPD iyo xiisaha raadinta ee loo adeegsado isticmaalka fiidiyowga qaawan waxaa dhexdhexaadiyay qiimeynta ku qanacsanaanta orgasmka. Guud ahaan, natiijooyinka daraasaddu waxay la jaanqaadayaan mala-awaalka in IPD uu ku xiran yahay dhiirigelinta helitaanka qanacsanaanta galmada iyo in laga fogaado ama la qabsado shucuurta ka soo horjeedka iyo sidoo kale iyadoo loo maleynayo in isbeddelada niyadda ka dib isticmaalka qaawan ay ku xiran tahay IPD (Cooper et al., 1999 iyo Laier iyo Brand, 2014).
30) Dabeecadaha galmada ee dhibaatooyinka dhalinyarada ah: Ururada isbedelka daaweynta, dabeecadda, iyo isbeddellada dareemayaasha (2016)
[hawl wadeen fulin liita] - Shakhsiyaadka leh Dabeecadaha Isku Galmoodka Dhibaatada leh (PSB) waxay soo bandhigeen dhowr cilladood oo xagga maskaxda ah. Natiijooyinkaasi waxay muujinayaan inay faqiir yihiin hawl fulinta (hypofrontality) taas oo ah a Tilmaamaha muhiimka ah ee maskaxda ee ku dhaca daroogada daroogada. Waxyaabaha kooban:
Mid ka mid ah natiijada ka soo baxday falanqayntan ayaa ah in PSB ay muujinayso ururo muhiim ah oo leh dhowr waxyaabood oo kiliinikarin ah, oo ay ku jirto hoosta isku kalsoonaanta, hoos u dhaca tayada nolosha, BMI sareeya, iyo heerka sarreysa ee cuduro badan ...
... sidoo kale waxaa suurtogal ah in qaababka kiliinikada ee lagu ogaaday kooxda PSB dhab ahaantii natiijada isbedelka jaamacadeed taas oo keenta labada PSB iyo sifooyinka kale ee kiliinikada. Mid ka mid ah qodobada suurtagalka ah ee buuxinaya kaalintan waxay noqon kartaa maqnaanshaha maskaxda ee lagu ogaaday kooxda PSB, gaar ahaan kuwa ku lug leh xasuusta shaqada, is-xakameynta / xakamaynta, iyo go'aan qaadashada. Laga soo bilaabo tan sifeynta, waxaa suurtagal ah in la raadiyo dhibaatooyinka ka muuqda PSB iyo sifooyinka qalliinka ee dheeraadka ah, sida dareen diimeed, si gaar ah garashada garashada ...
Haddii dhibaatooyinka garashada ee lagu qeexay falanqayntani dhab ahaantii astaamaha muhiimka ah ee PSB, tani waxay lahaan kartaa saameynta daaweynta ee la arki karo.
31) Dhiig-baxa ee HPA Xiddigaha La Xidhiidha ee Ragga ee leh Cilad-darro Ba'an (Jokinen et al., 2017)
[jawaab celinta cadaadiska aan shaqeynin, isbeddelada epigenetic] - Tani waa dabagal #16 ee kor ku xusan taas oo ay ku ogaatey in dadka galmoodka ah ay leeyihiin nidaam cadaadis aan kala go 'lahayn - isbeddelka muhiimka ah ee neuro-endocrine oo ay sababtay maandooriye. Daraasadda hadda la ogaaday ayaa isbeddelada epigenetic ku samaysay isbeddellada ku salaysan hiddo-wadaha si loogu jawaabo bani-aadmiga bini'aadamka oo si dhow ula xiriirta qabatimmada Iyada oo isbeddellada epigenetic, qaabka DNA lama beddelin (sida ku dhacda isbeddel). Taa baddalkeeda, hawdka ayaa la soo celin karaa oo muujintiisa ayaa loo rogay ama hoos loo dhigay (fiidiyo gaaban oo sharxaya epigenetics). Isbeddelada epigenetic-ka ee laga soo sheegay daraasaddan waxay keeneen waxqabadka hidaha ee CRF. CRF waa neurotransmitter iyo hoormoon taas oo keenta dabeecadaha la qabatimay sida jahawareerka, waana a cayaaryahan weyn in badan oo ka mid ah calaamadaha soo noqoshada ee la xidhiidha walax iyo mukhaadaraadka akhlaaqda, oo ay ku jiraan Maandooriye.
32) Sahaminta Xiriirka u dhexeeya Isku-Duubashada Isku-xirka iyo Xeelad Xeelad Ah Ku Saabsan Kalmadaha La Xiriira Galmada ee Koox-wadaag ah ee Shakhsiyaadka Jinsi-firfircoon (Albery et al., 2017)
[cue reactivity / sensitization great, sensensation] - Daraasadani waxay soo celineysaa natiijooyinka daraasaddan 2014 University Cambridge, taas oo la barbardhigay indho-indheynta indha-indheynta si loo ilaaliyo kontoroolka caafimaadka qaba. Waa kuwan cusub: Daraasadu waxay xiriirisaa "sannadihii hawlaha galmada" 1) dhibcaha mukhaadaraadka jinsiga iyo sidoo kale 2) natiijooyinka ka soo baxay shaqadii nacaybka ahaa. Kuwa ka midka ah dhibcaha ugu badan ee kufsiga galmada, sannado yar oo waayo-aragnimo jinsi ah ayaa la xiriirta indho-indheyn badan (sharraxaad ku dhejisan indhaha).
Marka dhibco isku qasbid galmo oo sareeya + sanado yar oo khibrad jinsi ah = calaamadaha waaweyn ee balwadda (eexasho weyn, ama faragalin). Laakiin indho-indheynta indho-indheynta ayaa si aad ah hoos ugu dhacday dadka isticmaala qasabka, waxayna ku baaba'aysaa tirada ugu badan ee sannadaha khibrada galmada. Qorayaashu waxay soo gabagabeeyeen in natiijadani ay muujin karto in sannado badan oo "waxqabad galmo qasab ah" ay horseed u tahay habeyn ballaaran ama kabuubis guud oo ku saabsan jawaabta raaxada (miyir beelid). Qayb ka mid ah gabagabada:
Hal sharrax oo macquul ah oo ku saabsan natiijooyinkaan ayaa ah in maadaama galmo qasab ah oo shaqsi ahaaneed ku qasbeysa dabeecad xoog leh, qaab dhismeedka kacsanaanta leh uu korayo [36-38] isla markaana waqti ka dib, dabeecad xumo dheeraad ah loo baahan yahay isla heer ah dhiirrigelinta si loo gaaro. Waxaa si dheeraad ah loogu dooday in shaqsi ahaan uu ku lug yeesho dabeecad xoog badan, neuropathways wuxuu u qulqulaa si ka sii xoog badan 'caadooyinka' kicinta galmada ama sawirada iyo shakhsiyaadka waxay u leexdaan kicinta 'xad dhaafka ah' si ay u gaaraan rabitaanka rabitaanka. Tani waxay la jaanqaadeysaa shaqada muujineysa in ragga 'caafimaad qabta' ay caadeystaan ​​inay si cad u kacaan waqti ka dib iyo in dabeecaddan lagu garto jawaab celinta firfircoonaanta iyo rabitaanka cuntada .
Tani waxay soo jeedineysaa in kaqeybqaadasho badan, kaqeyb galayaasha firfircoon ay noqdeen kuwo 'kabuubyo' ama aad u danaynaya ereyada 'caadi ahaan' jinsi la xiriira ee loo adeegsaday daraasadda hadda jirta iyo sida muuqaalka noocaas oo kale ah oo hoos u dhacay tixgalinta feejignaanta, halka kuwa khibrada badan leh iyo khibrada yar ay wali muujiyeen faragelin. maxaa yeelay kicinta ayaa ka tarjumaysa garaadka garaadka badan.
33) Fulinta Fulinta ee Xanuunada Jinsiga ah iyo kuwa aan galmada ahayn ee ka hor iyo ka dib Daaweynta Erotic Video (Messina et al., 2017)
[hawlaha fulinta ee saboolka ah, damacyada weyn / dareenka] - Soo-gaadhista hawlaha fulinta ee saameynta xun ee ragga leh "dabeecadaha galmada ee qasabka ah," laakiin maahan kantarool caafimaad leh. Hawlaha fulinta ee saboolka ah marka loo bandhigo tilmaamaha la xiriira balwadda waa astaan ​​lagu garto cilladaha walaxda (oo labaduba tilmaamaya wareegyada horay loo beddelay iyo dareenka). Astaamaha:
Natiijadani waxay muujinaysaa dabacsanaanta garashada ee kacaawinta galmada ka dib marka la barbar dhigo kaqaybgalayaasha galmada isku-tagga. Xogtaasi waxay taageertaa fikradda ah in raggu rabaan in ay ka faa'iideystaan ​​saameynta waxbarashada ee suurtogalka ah ee khibradda, taas oo keeni karta in dib loo habeeyo habdhaqanka. Tani waxaa kale oo la fahmi karaa in ayan jirin wax saameyn ah oo ay sameeyeen kooxda jinsi ahaan isku-tagga ah marka ay jinsi ahaan la kiciyay, oo la mid ah waxa dhacaaya wareegga galmada ee galmada, taas oo ka bilaabata xaddiga kordhinta garashada galmada, oo ay ku xigto dhaqdhaqaaqa galmada qoraallada iyo ka dibna orgaanku, oo inta badan ku lug leh xaaladaha khatarta ah.
34) Pornography ma noqon kartaa mid addictive? Daraasad fMRI ah oo ragga raadinaya daaweyn loogu talagalay dadka maskaxda ahGola iyo al., 2017)
[falcelin cune / dareen weyn, jawaabo shuruudaysan oo la wanaajiyey] - Daraasad fMRI ah oo ku lug leh qaab-fal-celin-fal-celin gaar ah oo qaabab hore oo dhexdhexaad ah u saadaaliyeen muuqaalka sawirrada qaawan. Qeybaha
Ragga iyo kuwa aan lahayn dhibaatada porno (PPU) waxay ku kala duwan yihiin falceliska maskaxeed ee lagu kalsoonyahay sawirada erotic, laakiin maaha jawaabta sawirrada erotic, saliida dhiirigelinta aragtida mukhaadaraadka. Hawlgalkan maskaxeed waxaa la socday dhiirigelin dabeecadeed oo lagu eegayo sawirrada erotic (oo 'sare'). Jawaab-celinta uur-qaadida Ventral-ka ee ku saabsan saadaalinta sawirada qadiimiga ah waxay si aad ah ula xidhiidhaan darnaanta PPU, qadarka isticmaalka filimada filimka toddobaadkii iyo tirada todobaadlaha wiigga. Waxyaabaheenu waxay soo jeedinayaan in sida isticmaalka walxaha isticmaalka iyo khamaarka uu yahay habdhismeedka neerfaha iyo habdhaqanka ee ku xiran waxqabadka qiyaasida ee tilmaamayaasha muhiimka u ah sifooyinka qalliinka ee khuseeya PPU. Natiijooyinkani waxay soo jeedinayaan in PPU ay meteli karto daroogada anshaxa iyo faragelinta waxtar leh ee lagu beegsanayo habdhaqanka iyo walxaha mukhaadaraadka loo baahan yahay in la tixgeliyo tixgelinta la qabsiga iyo isticmaalka caawinta ragga qaba PPU.
35) Tilmaamaha iyo Cilmi-la'aanta Qiyaasaha Dareenka: Ma Waxay Isku Khilaafsanyihiin Joogitaanka Filimada Joogitaanka? (Kunaharan et al., 2017)
[habituation or desensitization] - Daraasad lagu sameeyay qiimeynta isticmaaleyaasha qaawan ee jawaabta leh (Akhriska EEG & Jawaabta Bilowga ah) ee sawirro kala duwan oo shucuur kicinaya - oo ay ku jiraan erotica. Daraasadu waxay heshay dhowr kala duwanaansho xagga neerfaha ah oo u dhexeeya dadka isticmaala lebbiska hooseeya iyo kuwa isticmaala lebbiska badan. Qeybaha
Natiijooyinka waxay soo jeedinayaan in isticmaalka daroogada sii kordhaya uu u muuqdo inuu saameyn ku yeeshay jawaabaha maskaxeed ee aan maskaxda ku haynin dareemayaasha dareen-celinta oo aan lagu muujin is-muujin toos ah.
4.1. Qiimayn cad: Aragtida, kooxda adeegsiga garyaqaanka oo sareeya waxay ku qiimeeyeen sawirrada erotic-ga sidii ay uga xun yihiin kooxda adeegsiga dhexdhexaadinta. Qorayaashu waxay soo jeedinayaan in ay sabab u tahay dabeecadda "jilicsan" ee muuqaalka "erotic" ee ku jira xogta IAPS ee aaney bixin heerkii dhiirigelinta ay caadi ahaan raadin lahaayeen, sida ay muujisay Harper iyo Hodgins  in iyadoo si isdaba joog ah loo daawado waxyaabaha qaawan, shakhsiyaad badan ayaa badanaa u sii kacaya inay arkaan waxyaabo aad u murugsan si ay u ilaaliyaan heer isku mid ah jimicsiga jir ahaaneed.
Qeybta shucuurta "raaxada" waxay aragtay qiimeynta fanaaniinta dhamaan sedexda koox si ay ugu ekaato la mid ah kooxda aadka u isticmaasha qiimeynta sawirada inay waxyar ka xun yihiin celceliska kooxaha kale. Tan waxaa laga yaabaa inay mar kale u dhacdo 'sawirrada' wacan 'ee la soo bandhigay oo aan dhiirrigelin ku filan shakhsiyaadka ku jira kooxda isticmaalka badan. Daraasaduhu waxay si joogto ah u muujiyeen hoos u dhaca jir ahaaneed ee ka baaraandegida waxyaabaha ka kooban cuntada sababta oo ah saamaynta dabeecadaha ee shakhsiyaadka sida joogtada ah u raadsada waxyaabaha galmada ah [3, 7, 8]. Waa falanqeeye qorayaasha ah ee saameyntan ku yeelan karta natiijooyinka la arkay.
4.3. Horumarinta Horumarka (Started Reflex Modulation) (SRM): Saamaynta korodhka ilmo korodhsan ee ilbiriqsiyada leh ee lagu arko kooxaha isticmaalkooda hooseeya ee dhexdhexaadka ah iyo kuwa dhexdhexaadka ah waxaa laga yaabaa inay sharxaan kuwa ku jira si ula kac ah looga fogaado isticmaalka filimada sawirrada, maadaama ay u arkaan in ay tahay mid aad u xun. Dhinaca kale, natiijooyinka la helay waxay sidoo kale laga yaabaa in ay sabab u tahay saameynta dhaqan-gelinta, iyadoo shakhsiyaadka kooxahani ay daawadaan filimmo dheeraad ah marka loo eego si cad oo laga yaabo in ay sabab u yihiin sababaha ka xishoodsiinta kuwa kale, maaddaama ay saameyn ku yeelatay in la kordhiyo jawaab-celinta indhaha indhaha ee indhaha.41, 42].
36) Ku-soo-qaadista Xaddiga Galmada waxay muujineysaa qiimaha sarreeya ee keeneysa in lagu kordhiyo ka-qaybgalka qabashada dambiyada internetka dhexdiisa (Cheng & Chiou, 2017)
[Hawlaha fulinta ee saboolka ah, shucuur-darrada weyn - tijaabada keenista] - Laba daraasadood oo lagu soo bandhigo dareenka jinsiga ee muuqaalka leh waxay keentay: 1) dhimis ballaaran oo dib-u-dhac ah (awood la'aan dib-u-dhigista qanacsanaanta), 2) rabitaan weyn oo ku lug leh dembi-galinta internetka, 3) inaad iibsato alaabo been abuur ah oo aad jabsato koontada Facebook ee qof. Isku soo wada duub tani waxay muujineysaa in isticmaalka suufku uu kordhiyo jahwareerka oo uu yareyn karo howlaha fulinta qaarkood (is-xakamaynta, xukunka, saadaalinta cawaaqibka, xakamaynta kicinta). Qayb
Dadku waxay badanaa la kulmaan dareenka galmada inta lagu jiro isticmaalka internetka. Cilmi-baadhis ayaa muujisay in dareenka kufilan dhiirigelinta jinsiga uu horseedi karo isdhexgalka ragga, taas oo muujinaysa qiimo dhimis mudo dheer ah (tusaale ahaan, dareenka ah inuu doorbido yar yar, si deg-deg ah ugu sii weynaado, kuwa mustaqbalka ah).
Gebogebada, natiijooyinka imika waxay muujinayaan xiriirka ka dhexeeya dareenka jinsiga (sida, sawirada sawirrada haweenka galmada ah ama dharka galmada lagu jiido) iyo ragga raga ku lug leh dambiyada internetka. Natiijooyinkayagu waxay soo jeedinayaan in ragga iyo xakamaynta, sida muuqata hoos u dhigista waqtiga gaaban, ay u nugul yihiin guuldarada soo wajahda dareenka jinsiga ah. Ragga waxaa laga yaabaa inay ka faa'iidaystaan ​​kormeerka iyo in kale oo la xidhiidha dareenka jinsiga ee la xidhiidha doorashooyinka iyo dabeecadaha dambe. Waxyaabaheenu waxay soo jeedinayaan in ay la kulmayaan dareenkooda jinsiga ah inay dadka ka dhaadhicin karto waddada dambiyada internetka
Natiijooyinka iminka jira waxay soo jeedinayaan in helitaanka sare ee xayiraadda jinsiga ee ku yaala internetka ay si aad ah ula xidhiidha dabeecada internet-ka ah ee loo yaqaan 'cyber-delinquent behavior' ka badan sidii hore loo fikiray.
37) Saadaalinta (Dhibaato) Isticmaalida Internetka Qalabka Jirdilka Cadadka ah: Doorka Xad-gudubka Dabeecadda Isku-Daga-jinsiga iyo Hoos-u-Qaadid Nidaamyada Heer-kulaadaha Qalabaynta Jinsiga ah (Stark et al., 2017)
[fal-celinta ugu weyn ee dareenka / dareenka / damaca] - Calaamadaha:
Daraasaddan baadhitaanku waxay baadhis ku samaysay, in dabeecada jinsiga ah ee rabshadaha iyo hababka tooska ah ee ku lug leh arrimaha galmada ay yihiin saadaaliyayaal ah dhibaatada SEM ee dhibaatada leh iyo wakhtiga maalinlaha ah ee lagu qaato daawashada SEM. Imtixaanka dabeecadda, waxaan isticmaalnay Hawl-Takoorka-Ka-hortagga (AAT) si loo cabbiro hababka aan tooska ahayn ee ku aaddan habka galmada. Isku xirnaan wanaagsan oo u dhaxaysa dabeecadaha aan tooska ahayn ee u dhaxeeya SEM iyo wakhtiga maalinlaha ah ee lagu qaato daawashada SEM waxaa laga yaabaa in lagu sharxo saamaynta saamaynta leh: Jihada tooska ah ee macquul ah waxaa loo fasiri karaa inay tahay mid indho-indheyn ku wajahan SEM. Mawduucan ku dheelitiran indho-indheynta ayaa laga yaabaa in ay soo jiidato farriimaha galmada ee internetka taasoo sababtay in badan oo waqti lagu qaato goobaha SEM.
38) Cudurka 'Addiction Detection Detection' oo ku saleysan habka loo yaqaan 'Norrophysiological Method Approach' (2018)
Qoraalkan, habka isticmaalka signalka maskaxda ee ka soo horjeeda aagga hore ee lagu qabtay EEG ayaa la soo jeediyey si loo ogaado haddii uu ka qaybqaatay midkale oo xajin karo ama haddii kale. Waxay u shaqaysaa sida habdhaqan dhamaystiran ee suáalaha cilmi-nafsiga ee caadiga ah. Natiijooyinka tijaabada ah waxay muujinayaan in ka-qaybgalayaasha qabatimay ay leeyihiin dhaqdhaqaaqa alfa-hoose oo hooseeya ee ku yaala dhinaca hore ee maskaxda ee marka la barbar dhigo ka-qaybgalayaasha aan sifududka lahayn. Waxaa la ogaan karaa iyada oo la adeegsanayo awoodda korantada oo lagu xisaabiyey iyadoo la isticmaalayo Low Resolution Electromagnetic Tomography (LORETA). Kooxda xuubka ayaa sidoo kale muujisa in ay jirto farqi u dhexeeya daroogada iyo kuwa aan la qabatimayn. Si kastaba ha noqotee, kala soocida maahan mid u muuqda sida kooxda alfa.
39) Dhibaatooyinka miisaanka iyo isbeddelka ku-xirnaanta-nasashada ee ku-meel-gaadhka ah ee curyaamiinta ah ee ka dhexjirta shakhsiyaadka leh dhibaatada habdhaqanka xun (2018)
[cilladaha cawdu ku yar tahay ee kiliyaha kumeelgaarka ah, isku xirnaanta shaqada ee saboolka ah ee udhaxeysa kiliyaha iyo preuneus & caudate] - Daraasad fMRI ah oo isbarbar dhigeysa dadka balwada leh ee galmada si taxaddar leh loo baaray ("dabeecad xumada leh") Marka loo barbardhigo xakamaynta dadka balwada leh waxay leeyihiin: 1) hoos udhaca maadada cawlan ee goolalka kumeelgaarka ah (gobolada laxiriira kahortaga kacsiga galmada); 2) hoos udhaca kudhaca kiliyaha kumeelgaarka ah ee shaqeynaya (waxaa laga yaabaa inay muujiso cillad aan caadi aheyn oo awood u leh inuu leexiyo dareenka); 3) hoos u dhigista caudate-ka ee ku xirnaanta waxqabadka korantada kumeelgaarka ah (waxaa laga yaabaa inay xakameyso xakamaynta kor-hoos ee dareenka). Qeybaha
Natiijooyinkaasi waxay soo jeedinayaan in qaab-dhismeedka cillad-darrada ah ee gyrus-ka iyo xidhiidhka farsamaysan ee ka dhexeeya cirridka xilliga iyo meelaha gaarka ah (ie, digniinaha iyo coodada) ay gacan ka geysan karaan dhibaatooyinka ku jira tayada xakamaynta galmada ee shakhsiyaadka qaba PHB. Sidaa daraadeed, natiijooyinkaan waxay soo jeedinayaan in isbeddelka qaab-dhismeedka iyo isku xirnaanta shaqeynta ee gyruska xilliga ku-meel-gaadhka ah uu noqon karo qaababka gaarka ah ee PHB waxana laga yaabaa inay noqon karaan musharrixiiyeyaasha noolaha si loogu ogaado PHB.
Xaaladda korriinada ee xayiraadda saxarada saxda ah ee saxda ah iyo kordhinta isku-xirnaanshaha xabuubka bidix ee bidix ee lala galo STG bidix ayaa sidoo kale lagu arkay .... Sidaa daraadeed, waxaa suurtagal ah in mugga weelka culus iyo xiriirinta ficilka ee xuubka maskaxdu ay la xiriirto dabeecadaha adag ee shakhsiyaadka qaba PHB.
Dulucda, VBM ee hadda iyo daraasada xidhiidhinta shaqeynta waxay muujisay isbeddellada mawduucyada kala duwan iyo isbedelka farsamooyinka ee isbeddelka tooska ah ee gyruska xilliga ku jira shakhsiyaadka leh PHB. Muhiimad ahaan, qaabdhismeedka hoos u dhaca iyo isku xirnaanta shaqeynta ayaa si xun ula xiriiray darnaanta PHB. Natiijooyinkani waxay muujinayaan aragtida cusub ee hababka neerfaha ee PHB.
40) Tilmaamo dhinaca ladagaalanka internetka-isticmaalka jilicsanaanta: Kala duwanaanta raga iyo haweenka ee ku saabsan dareenka diidmada ee dareenka filimada (2018)
[fal-celinta ugu weyn ee dareenka / dareenka, rabitaannada la xoojiyay]. Qeybaha
Qorayaal dhowr ah ayaa tixgeliya khalkhalka isticmaalka-isticmaalka filimada-internetka (IPD) inay yihiin cilad-qabatin. Mid ka mid ah farsamooyinka si xoog leh loogu darsay cilladaha iyo dhibaatooyinka aan isticmaalka lahayn ayaa ah feejignaan feejignaan leh oo ku wajahan tilmaamaha la xiriira balwadda. Eexashada foojignaanta waxaa lagu sharaxay inay tahay geedi socod garasho garasho shaqsiyeed oo ay saameysay tilmaamaha la xiriira balwadda ee ay sababtay salience dhiirigalin leh oo shuruud ah lafteeda. Waxaa loo maleynayaa qaabka I-PACE in shakhsiyaadka u nugul inay yeeshaan calaamadaha IPD garashada garashada leh iyo sidoo kale falcelinta iyo rabitaanka soo baxa oo ku kordha habka qabatinka. Si loo baaro doorka eexashada foojignaanta ee horumarinta IPD, waxaan baarnay muunad kaqeybgalayaasha 174 rag iyo dumar ah.
Feejignaanta feejignaanta waxaa lagu cabiray Hawlaha Baarista Muuqaalka, taas oo kaqeybgalayaashu ay ahayd inay ka falceliyaan fallaaraha soo muuqda ka dib sawirro qaawan ama dhexdhexaad ah. Intaa waxaa dheer, kaqeybgalayaashu waa inay muujiyaan kacsigooda galmada ee ay keeneen sawirro qaawan. Intaa waxaa sii dheer, u janjeedha IPD waxaa lagu cabiray iyadoo la adeegsanayo Imtixaanka Maandooriyaha ee Internet-ka ee gaaban. Natiijooyinka daraasaddan waxay muujiyeen xiriirka ka dhexeeya eexashada feejignaanta iyo darnaanta astaamaha ee IPD qayb ahaan lagu dhexdhexaadinayo tilmaamayaasha fal-celinta iyo damaca. In kasta oo ragga iyo dumarku guud ahaan ku kala duwan yihiin waqtiyada falcelinta sababo la xiriira sawirro qaawan, falanqeyn dhexdhexaad ah ayaa muujisay in indho-indheynta foojignaanta ay si madax-bannaan u galmoodaan marka loo eego astaamaha IPD. Natiijooyinka waxay taageerayaan fikradaha fikradaha ee qaabka I-PACE ee laxiriira dhiirigelinta dhiirrigelinta tilmaamaha laxiriira mukhaadaraadka waxayna la jaan qaadayaan daraasadaha wax ka qabashada falcelinta iyo damacsanaanta dhibaatooyinka isticmaalka maandooriyaha
Daraasaddan cilmi-baarista ee dareemeyaasha ee la helay:
3 isbedelka maskaxda ee isbedelka maskaxda ee la xiriira: dareenka, Maqnaanshaha, Iyo hypofrontality.
Isticmaal badan oo porno ah oo isku xiran oo leh aruur yar oo ka mid ah wareegga abaal-marinta (goryaanka dorsalum).
Kordhinta isticmaalka sigaarka ayaa xiriir la leh firfircoonida wareegga wareegga markii si kooban loo daawado sawirrada galmada.
Isticmaal badan oo porno ah oo la xidhiidha isku xirnaanta neeriga ah ee u dhaxeeya wareegga abaalmarinta iyo kortex doorbid.
Xannaaneeyayaasha waxay leeyihiin firfircooni horay loo soo jeediyay oo ku saabsan calaamadaha galmada, laakiin dhaqdhaqaaqa maskaxeed oo yareynaya ciyaraha caadiga ah (la isku daro maandooriye daroogo)
Isticmaalka sigaarka / soo-qaadista porn-ka ee la xidhiidha sicir-dhimista ugu weyn (awood la'aanta in dib loo dhigo raashin). Tani waxay calaamad u tahay hawlaha fulinta saboolnimada.
60% maadooyinka qasabka ah ee maandooriyaha ah ee hal daraasad ah ayaa khibrad u leh ED ama libido hoose oo lala yeesho wada-hawlgalayaasha, laakiin aan loola jeedin lebbiska: dhammaantood waxay sheegeen in isticmaalka suufka internetka uu sababay ED / libido hoose.
Fududeynta feejignaanta oo loo barbardhigo dadka isticmaala daroogada. Waxay muujisaa dareenka (wax soo saar DeltaFosb).
Rabitaan weyn & ujeedo jilicsan, laakiin aan jeclaan weyn. Tani waxay la jaanqaadeysaa qaabka la aqbalay ee balwadda - dareenka dhiirigelinta.
Dadka soomaliga ahi waxay leeyihiin door weyn oo loogu talagalay ra'yiga galmoodka, hase yeeshee, maskaxdooda waxay u dhaqmeen si dhakhso ah sawirrada galmada. Aan horey u jirin.
Dhalinyarada yar yar ee isticmaala sigaarka ayaa ah midka ugu weyn ee fal-dambiyeedka ee xarun abaalmarinta.
Akhriska sare ee EEG (P300) marka dadka isticmaala sifaha loo soo bandhigay sheekooyinka leexda (taas oo dhacda ku darid kale).
Doonista jinsiga ah ee qof la xidhiidha dabeecad-celin dheeraad ah ee muuqaalka sawirrada.
Isticmaal badan oo jajab ah ayaa isku xira qiyaasta LPP hoose markaad si kooban u fiirsato sawirrada galmada: waxay muujinaysaa habeyn ama habeyn la'aan.
Xajmiga HPA ee aan shaqaynayn iyo isbeddelay xawaaraha murugada maskaxda, kaas oo ka dhacaya daroogooyinka daroogada (iyo hannaanka amygdala ee weyn, oo la xidhiidha walaaca bulsheed ee joogtada ah).
Epigenetic isbeddel ku yimaado hiddo-wadaha dhexe ee ka jawaab celinta bini'aadamka bini'aadamka oo si dhow ula xiriirta mukhaadaraadka
Heerarka sare ee Tumor Necrosis Factor (TNF) - oo sidoo kale ka dhacda xadgudubka daroogada iyo takoorka.
Maqnaanshaha korsaarka duleedka ah; isku xirka saboolka ah ee u dhaxeeya shirkadaha ku meel gaadhka ah iyo dhowr gobol oo kale